Iiperks zokuba ulahliwe, Umsebenzi kaChbosky wempikiswano | Uncwadi lwangoku
Izibonelelo zokuba ulahliwe
UJuan Ortiz | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli, Ezahlukeneyo
Izibonelelo zokuba ulahliwe.
Iiphakethi zokubayityantyambo yodonga, isihloko sokuqala ngesiNgesi) yincwadi yenoveli yombhali, Umbhali wesikrini waseMelika kunye nomlawuli, UStephen Chbosky. Yapapashwa ngo-1999 zii-MTV Books, yafumana amanani orhwebo aphambili. Nangona kunjalo, isicatshulwa sasivinjelwe kwizikolo ezininzi ngenxa yombono ophikisanayo ngesini sokufikisa kunye nokuvavanywa kweziyobisi.
Umsebenzi wakhutshwa kwintengiso yabantu abathetha iSpanish yindlu yokupapasha yeAlfaguara Juvenil, eguqulelwe nguVanesa Pérez-Sauquillo. E-Spain yavela phantsi kwegama «Izibonelelo zokuba ulahliwe"; kwiLatin America yaphakanyiswa njenge «Izibonelelo zokuba ungabonakali». Kwakhona, ngexesha lokuwa kuka-2012 uguqulelo lwefilimu olungaziwayo luye lwakhutshwa phantsi kwesikhokelo sikaChbosky ngokwakhe.
2 Impikiswano evela kwiPerks of Out Outcast
3 Uhlalutyo, isishwankathelo kunye nabalinganiswa abaphambili
3.2 Isikolo samabanga aphakamileyo kunye "neMisfits"
3.3 Izinto eziguqukayo zokufikisa
3.5 Iinzingo zangaphambili ziyavela
3.6 Ubomi buyaqhubeka
4 Ukulungiswa kwefilimu
4.1 Umahluko phakathi kwencwadi kunye nomdlalo bhanyabhanya
UStephen Chbosky wazalwa ngoJanuwari 25, 1970, ePittsburg, e-USA Ezona mpembelelo zakhe zibalulekileyo zibandakanya ababhali abanjengo JD Salinger, F. Scott Fitzgerald no Tennessee Williams. Uqeqesho lwakhe lwezifundo lwagqitywa kwiSikolo soBugcisa beMifanekiso yoBugcisa kwiYunivesithi yeSouth California.
Iiphakethi zokubayityantyambo yodonga (1999) yayiyincwadi yakhe yokuqala epapashiweyo. Kunyaka kamva yaba yeyona ncwadi ifundwayo ngokubanzi kwiincwadi zeMTV. Ukongeza, ukubonakala kwesihloko kuluhlu lweencwadi ezili-10 ezona zinamabango oMbutho weThala leencwadi laseMelika, kube negalelo ekwandiseni umdla wabafundi.
Kwakhona ngo-2000, uChbosky wakhululwa ziingceba, intsomi yamabali amafutshane. Kwelinye icala, umbhali wepensilvan unikele phantse wonke umsebenzi wakhe obhaliweyo ekwandisweni kweencwadi zeempendulo zemiboniso bhanyabhanya kunye nomabonwakude, eziboniswe ngezantsi:
Iimbombo zone ndawo (Ifilimu ezizimeleyo apho wayekwangumdlali weqonga kunye nomlawuli; 1995).
irente (inqaku lefilimu; 2002).
Iiphakethi zokubayityantyambo yodonga (Isicatshulwa sefilimu epapashwe ngo-2012).
IYeriko (uthotho lweTV; 2006-2008).
Ngokuqhelekileyo ngogonyamelo (uthotho lweTV; 2013).
Ubuhle nerhamncwa (inqaku lefilimu; 2017).
Impikiswano evela Izibonelelo zokuba ulahliwe
Ungayithenga le ncwadi apha: Izibonelelo zokuba ulahliwe
UCharlie, umlinganiswa ophambili, uneentloni, ulilolo, unomdla, ulutsha oluthembekileyo noluthembekileyo. Inkxalabo yakhe enkulu kukuziqhelanisa nemeko yesikolo esiphakamileyo ngaphandle kwenkxaso yomhlobo wakhe osenyongweni, uMichael, owazibulala kwiinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuba kuqale isikolo. Ukoyisa le lahleko, umlinganiswa ophambili uqala ukubhala iileta eziya kumhlobo.
Ngale ndlela, umbukeli uyazazi ngokwakhe iingcinga kunye nokunxibelelana kwenkwenkwe kunye namalungu othandekayo osapho. Kanye kunye neqela lakhe lokuqala labahlobo, abanye "badibanisiwe" njengaye (kodwa ukusukela kunyaka ophelileyo). Kunye nabo uya kuhlala amava akhe okuqala kunye neziyobisi kwaye uya kuqala ukuqonda imiba enxulumene nokwabelana ngesondo kunye nokuba mdala.
Uhlalutyo, isishwankathelo kunye nabalinganiswa abaphambili
Ekuqaleni kwebali uCharlie uneminyaka elishumi elinesihlanu ubudala kwaye uchaza ngonxibelelwano lweeleta- nomfundi - ukuba bunjani ubomi bakhe. Indawo yakhe yosapho izinzile kwaye ifudumele (Ngaphandle kotatomkhulu ongumama onezimvo zakhe zobuhlanga kunye nezobufanasini). Umama unothando, ngakumbi ke akanakukufumana ukusweleka kukadadewabo uHelen, okwenzeka ngomhla wesixhenxe wokuzalwa kukaCharlie.
Utata unobubele kwaye uyaqonda, nangona ngaphakathi enengxaki yomfazi wakhe. Umkhuluwa kaCharlie wayeyinkwenkwe yebhola ekhatywayo kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye kufanelekile kweli yelenqe kuba umfundisa ukulwa. Udadewabo uCandace unesithandwa esithandwayo nesilawulayo (uDerek) esimkhulelisayo. Uthatha isigqibo sokukhupha isisu kwaye uCharlie uhamba naye ukuya ekliniki.
Isikolo samabanga aphakamileyo kunye "neMisfits"
Ngexesha lesikolo samabanga aphantsi, uCharlie wayesondele kakhulu kuMichael kunye nentombi yakhe, uSusan. Kodwa emva kokubhubha kukaMichael, wakhula waya kude kwaye waba lilolo ngakumbi. Ngaphandle kukatitshala wesiNgesi, uBill Anderson, uCharlie akakwazi ukudibana nabanye abantu. Ubuncinci utitshala uyamkhuthaza ukuba aphuhlise ubizo lwakhe lokufunda, nangaphezulu, umabela izincoko ezongezelelweyo kwaye amboleke ezona ncwadi azithandayo.
Iintsuku ke zihamba de uCharlie abe ngumhlobo kaPatrick kunye nomlingane wakhe uSam, bobabini abadala. Ngokukhawuleza uthandana naye, kodwa akacingi ukuba unethuba. Ngapha koko, Oomama bomtshato wesibini bazisa uCharlie kwisangqa sabahlobo babo, kubandakanya noMary Elizabeth, Ngubani oza kuba yintombi yokuqala kaCharlie.
Izinto eziguqukayo zokufikisa
UCharlie uvelisa unxibelelwano olusondeleyo noSamngakumbi emva kokufunda ngokuxhatshazwa kwakhe xa wayesengumntwana. Kodwa uyintombi kaCraig, mhle kwaye udumile umfundi wasekholejini. Kwelinye icala, UPatrick (wabhengeza ubufanasini) ugcina ukuthandana ngokufihlakeleyo noBrad (isitabane esithandanayo), kwikota yeqela lesikolo.
Kwelinye lamaqela akhe okuqala, uCharlie uyawa emva kokuzama i-LSD kwaye uphelela esibhedlele. Nangona ukusebenza kwakhe ezifundweni kuhlala kuphezulu, ubomi bakhe buqu "yintlekele epheleleyo" ... UCharlie akakwazi ukuvula uMary Elizabeth (ufuna ukwahlukana naye). Endaweni yoko, ubonakalisa iimvakalelo zakhe ngeyona ndlela imbi: embindini womdlalo "wenyani okanye ubuganga" uthatha isigqibo sokumanga uSam.
UCharlie - ngengcebiso kaPatrick- urhoxa okwethutyana kwiqela labahlobo bakhe. Kwiintsuku ezithile emva koko, U-Brad ubonakalisa iimpawu zokubethwa kakhulu nguyise (emva kokumbamba ephuza uPatrick). Emva kwexesha, kwivenkile yokutyela, abantwana afunda nabo kuBrad bahlasela uPatrick. UCharlie usindisa umhlobo wakhe kwaye woyikisa uBrad ukuba axelele wonke umntu inyani.
Emva kwesiqendu sokutya, uCharlie wamkelwe wabuyela kwiqela. Okwangoku uMary Elizabeth ufumene isoka elitsha. Kungekudala emva koko, uSam wahlukana noCraig ngenxa yokungathembeki kwakhe. Ekugqibeleni, unyaka wesikolo uyaphela kwaye abantu abadala babhiyozela. UCharlie uziva evuya, nangona ngaphakathi engonwabanga malunga nokuhamba kwabahlobo bakhe okusondeleyo.
Iinzingo zangaphambili ziyavela
UCharlie wayesoloko enomhlobo wakhe uMichael isalathiso esicacileyo sendlela angafuni ngayo ukuphela (ukudakumba, ukuzibulala). Nangona kunjalo, xa uSam epakisha izinto zakhe zekholeji, ujongana naye. Ikuxelela ukuba awukwazi ukubeka intlalontle yabanye ngaphambi kweyakho ngalo lonke ixesha.
Ngalo mzuzu uCharlie noSam bayamanga ... uchukumisa ingqolowa yakhe; akonwabanga kwaye umxelele ukuba akakakulungelanga ukulala ngesondo. Ngobo busuku uCharlie amaphupha (uyakhumbula) ukuba umakazi wakhe uHelen wambamba ngendlela efanayo. Xa uCharlie esiba nolwazi malunga nokuxhatshazwa ngokwesondo ngexesha lobuntwana bakhe, ukhathazwa kukoyika.
Caphulelwa nguStephen Chbosky.
Kwenye yeeleta, UCharlie ubalisa ukuba abazali bakhe bamfumana bekwikatoniki esofeni ekhaya. Ngenxa yoko, wamkelwa kwiziko labagula ngengqondo. Ngoncedo loogqirha basesibhedlele kunye nenkxaso yezalamane zakhe, uCharlie wakwazi ukuxolela umakazi wakhe. Nje ukuba akhululwe, uthatha isigqibo sokuyeka ukubhala iileta ... Lixesha lokuba azicwilise ngokupheleleyo ebomini bakhe.
Izibonelelo zokuba ungabonakali ibe yifilimu eyaziwayo kakhulu ngabagxeki kunye noluntu ngokubanzi. Ekhokelwa nguStephen Chbosky ngokwakhe, ibibonisa umlingisi weqonga uLogan Lerman (Charlie), U-Emma Watson (Sam) kunye no-Ezra Miller (uPatrick). Ngokwezibuyekezo ezizodwa, amagcisa akhankanyiweyo ahlengahlengiswe ngokupheleleyo kwinkcazo yomzimba kunye nengqondo yabalinganiswa.
Abanye abadlali abafanelekileyo yayinguPaul Rudd (uNjingalwazi Anderson), uMelanie Lynskey (Umakazi uHelen), uJohnny Simmons (uBrad), Mae Withman (Mary Elizabeth) kunye noReece Thompson (Craig). Kunye noDylan McDermott, uKate Walsh, uZane Holtz kunye noNina Dovrev, abamele abazali bakaCharlie kunye nabantakwabo, ngokulandelelana.
Umahluko phakathi kwencwadi kunye nomdlalo bhanyabhanya
Ukuba ngumboniso bhanyabhanya obhaliweyo kwaye ukhokelwe ngumbhali omnye wenoveli, utshintsho olwenzekayo belunqabile. Umahluko obaluleke kakhulu bubunzima bamalungu osapho lukaCharlie, aphezulu kakhulu encwadini. Kukwenzeka okufanayo ngendima yabanye abalinganiswa abasesekondari- njengoBob umthengisi wentsangu, umzekelo- ubalulekile kumyalezo opheleleyo wesicatshulwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Izibonelelo zokuba ulahliwe
UGuillermo Galván: "Luxanduva lombhali ngamnye ukuba afune elakhe ilizwi"